Tranga vaovao natokana ho an'ny mpandeha tratra tao amin'ny FRA
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tranga vaovao natokana ho an'ny mpandeha tratra tao amin'ny FRA
Ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) dia nanompo mpandeha maherin'ny 69.5 tapitrisa tamin'ny taona 2018, ka namoaka rakitsoratra vaovao ambony teo amin'ny tantaran'ny seranam-piaramanidina.
Raha oharina tamin'ny 2017, ny fivezivezena tao amin'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Alemana dia nitombo 5 tapitrisa ny isan'ireo mpandeha na 7.8 isan-jato. Io fitomboana matanjaka io dia vokatry ny fanombohana làlana maro mankamin'ny toeran-kaleha vaovao avy amin'ny FRA sy avy amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izay mampiakatra ny fahaizan'ny sidina.
Raha nilaza ny hevitry ny tarehimarika momba ny fifamoivoizana tamin'ny taona 2018, ny filohan'ny birao mpanatanteraky ny Fraport AG, Stefan Schulte dia nilaza hoe: Tany Frankfurt dia nahatratra ny fitomboan'ny mpandeha tanteraka izahay tamin'ny tantarantsika. Ity dia manasongadina ny toerana misy ny seranam-piaramanidina Frankfurt ho iray amin'ireo ivon-toeram-piaramanidina malaza any Eropa. Mandritra izany fotoana izany dia miteraka fanamby lehibe ho antsika sy ny sehatry ny seranam-piaramanidina manontolo ny fitomboana tsy manam-paharoa amin'ny fivezivezena amin'ny ankapobeny. Miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay dia manao ezaka izahay hamerenana amin'ny laoniny sy hanatsarana ny fahaizan'ny fotoana sy ny fahatokisana ny rivotra
Tamin'ny taona feno 2018, ny hetsiky ny fiaramanidina ao amin'ny FRA dia nitombo 7.7 isan-jato ka hatramin'ny 512,115 niainga sy niantsona tamin'ny taona 2018. Niakatra 5.1 isan-jato ihany koa ny lanjan'ny fihenam-bidy (MTOW) avo indrindra ka 31.6 tapitrisa metric taonina. Ny fandefasana entana (airfreight + airmail) dia namoaka fihenan'ny 0.7 isan-jato hatramin'ny 2.2 tapitrisa metric taonina, maneho ny fitomboan'ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny varotra manerantany, indrindra mandritra ny tapany faharoa amin'ny taona.
Tamin'ny Desambra 2018, mpandeha 4.9 tapitrisa mahery no nandeha namakivaky ny seranam-piaramanidina Frankfurt - fitomboana 7.8 isan-jato raha oharina tamin'ny Desambra 2017. Niakatra 9.0 isan-jato ny hetsika fiaramanidina ho 38,324 niainga sy niantsona, raha nitombo kosa ny MTOW nitombo 6.5 isan-jato hatramin'ny 2.4 tapitrisa metric taonina. Ny famindrana entana (airmail + airfreight) dia nitombo 1.9 isan-jato hatramin'ny 183,674 metric taonina tamin'ny volana nitaterana.
Ny seranam-piaramanidina ao amin'ny portfolio iraisam-pirenena Fraport dia nitatitra ihany koa ny fitomboana tsikaritra tamin'ny taona 2018. Ny CEO Schulte dia naneho hevitra hoe: Manohy manambola amin'ny seranam-piaramanidina misy ny portfolio iraisam-pirenena isika, ka miantoka ny fampandrosoana maharitra. Mba hananana fahaiza-manao fanampiny, dia eo am-panatanterahana tetikasa lehibe fanitarana ao amin'ny seranam-piaramanidina Vondronay izahay, indrindra any Gresy, Brezila ary Peroa. ”
Tany Slovenia, ny Seranam-piaramanidina Ljubljana (LJU) dia nampakatra fitomboana 7.7 isan-jato ho an'ny mpandeha mihoatra ny 1.8 tapitrisa tamin'ny taona 2018. Ny fifamoivoizana natambatra tao amin'ny seranam-piaramanidina Breziliana roa an'ny Fortaleza (FOR) sy Porto Alegre (POA) dia nitombo 7.0 isan-jato ho an'ny mpandeha 14.9 tapitrisa. Ny fifamoivoizana tao amin'ny seranam-piaramanidina grika 14 dia nandroso 8.9 isan-jato tamin'ny mpandeha efa ho 29.9 tapitrisa. Ny vavahady telo be olona indrindra ao amin'ny portfolio Grika Fraport dia ny seranam-piaramanidina Thessaloniki (SKG) misy mpandeha 6.7 tapitrisa (miakatra 7.1 isan-jato), Seranam-piaramanidina Rhodes (RHO) manana mpandeha 5.6 tapitrisa (miakatra 5.0 isan-jato), ary ny seranam-piaramanidin'i Corfu (CFU) izay nisondrotra ny fifamoivoizana 15.3 isan-jato hatramin'ny mpandeha efa ho 3.4 tapitrisa.
Ny seranam-piaramanidina Lima (LIM) ao an-drenivohitr'i Peru dia nandray mpandeha maherin'ny 22.1 tapitrisa tamin'ny taona 2018, izay nampitomboina 7.3 isan-jato.
Ao amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mainty Bulgaria, ny seranam-piaramanidina Twin Star any Varna (VAR) sy Burgas (BOJ) dia nanidy ny taona tamin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana 12.2 isan-jato ho an'ny mpandeha 5.6 tapitrisa. Ny seranam-piaramanidina Antalya (AYT) any Torkia dia nahita fandrosoana 22.5 isan-jato hatramin'ny mpandeha efa ho 32.3 tapitrisa. Seranam-piaramanidina Pulkovo (LED) any St. Petersburg, Russia dia nanompo mpandeha 18.1 tapitrisa mahery - fitomboana 12.4 isan-jato. Mpandeha 44.7 tapitrisa eo ho eo no nampiasa ny seranam-piaramanidina Xi'an (XIY) any Chine, tafakatra 6.7 ​​isan-jato.
Tantaran'i Jamaika roa: fitiavana ny mpitsidika ny zava-misy fizahan-tany ao Jamaika
Sichuan Airline dia manampy ny sidina Chengdu- Melbourne